जेसीजले युवाहरुलाई सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ : गणेशप्रसाद भट्टराई - Purbeli News
जेसीजले युवाहरुलाई सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ : गणेशप्रसाद भट्टराई
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २९, २०७६ समय: १४:२६:१०
सुन्दरहरैंचा / शासन व्याक्तिकाे हाेइन विधिकाे हुनु पर्दछ भन्ने जेसीज आस्था रहेकाे इन्द्रपुर जेसीजले विभिन्न समयमा नेपाल जेसीजकाे तर्फबाट राम्रो कार्य सम्पादन गरे बापतमा उत्कृष्ट जेसीज अबाड समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । इन्द्रपुर जेसीजले रक्तदान, जिल्लाव्यापी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, वृद्धवृद्धाहरुलाई फलफुल वितरण, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी, कपडा वितरण, समाजमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा बाढी र आगाेलागीबाट पिडित परिवारलाई राहत समाग्री वितरण गरि समाजमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको छ । जेसीज सप्ताह जस्ता समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको छ । इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचा नगरकाे पहिचान बढाएर परिचित गराउँन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह समेत गरेकाे पाहिन्छ । व्यातित्व र नेतृत्व विकास अनि अनुसाशनका लागि इन्द्रपुर जेसीसमा यूवाहरुकाे ठूलाे अाशा र भराेसा रहेकाे छ ।
अहिले इन्द्रपुर जेसिजकाे वर्तमान अध्यक्षमा जेसी गणेशप्रसाद भट्टराई रहेका छन । उनी बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संङ्घका अध्यक्ष तथा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक समेत हुन । अध्यक्ष भट्टराईसँग इन्द्रपुर जेसीजकाे सेराेफेराेमा रहेर गरिएको समसामयिक कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
इन्द्रपुर जेसीजको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
सर्वप्रथम त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्द्रपुर जेसीज परिवारलाई जसले एउटा विश्वासका साथ मलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको छ । नेतृत्व भन्ने बित्तिकै एउटा पाटो अवसरले भरिपूर्ण छ भने अर्को पाटोमा त्यति नै ठूलो चुनौति पनि रहेको हुन्छ । एउटा गहन जिम्मेवारी बोध भएको छ । खुशीका साथसाथै चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्न कटिबद्ध पनि छु ।
तपाईंको विचारमा जेसीज के हो ? यसले के काम गर्छ ?
जेसीज भनेको १८ देखि ४० बर्ष उमेर समूहका उर्वर र सृजनशील युवाहरुको नेतृत्व, व्यक्तित्व र भातृत्व क्षमताको विकास गर्ने एउटा विश्वव्यापी संस्था हो । यो संस्थाको केन्द्रविन्दु व्यक्ति हो । यसले आफ्ना प्रत्येक सदस्यको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गराउने कुरामा विश्वास गर्छ । यसले आफ्ना सदस्यहरुलाई उपयुक्त अवसरहरु उपलब्ध गराएर उनीहरुमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराई असल व्यक्तित्वको निर्माण गरी समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।
इन्द्रपुर जेसीजले समाजमा गरेका मुख्य मुख्य कामहरु के के हुन् ?
मैले अघि नै भनिसकेको छु कि जेसीजको केन्द्रविन्दु भनेको व्यक्ति हो । व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी हो । त्यसैले यो संस्था समाज निरपेक्ष हुनै सक्दैन । हाम्रो बुझाइ कमजोर हुनसक्छ तर असल, कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार नेतृत्वको निर्माण गरेर समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि एउटा कुशल नेता हस्तान्तरण गर्ने कार्य जेसीजले गर्दछ । जेसीजमा विशेष गरी ४ वटा अवसरका क्षेत्रहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये समुदायमा आधारित क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । इन्द्रपुर जेसीजले रक्तदान, जिल्लाव्यापी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, वृद्धवृद्धाहरुलाई फलफुल वितरण, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी, कपडा वितरण, जेसीज सप्ताह जस्ता समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको छ । समाज रुपान्तरणमा युवाहरुको अहम् भूमिका सम्बन्धीका विभिन्न तालिमहरु पनि जेसीजले आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यसरी युवाहरुलाई विभिन्न तालिमहरुको माध्यमबाट व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास साथसाथै आफू बस्ने समाज प्रतिको दायित्व बोध गराउने कार्य जेसीजले गर्दछ । त्यसैले पनि जेसीज भित्र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना सदैव रहेको हुन्छ ।
तपाईँको कार्यकालमा इन्द्रपुर जेसीजको आगामी योजना के छ ?
जेसीजमा विशेष गरी चारवटा अवसरका क्षेत्रहरु रहेका हुन्छन् । व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यवसायिक र अन्तराष्ट्रिय । यी चारैवटा क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर मैले मेरो कार्ययोजना बनाएको छु । मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको शाखामा विभिन्न सिपमूलक जीवन उपयोगी तालीमहरु सञ्चालन गरेर जेसीज सदस्यहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्नु रहेकको छ । विगत देखि इन्द्रपुर जेसीजले गर्दै आइरहेको अति आवश्यक कामहरुको निरन्तरता दिनेछु ।
त्यसैगरी यो वर्ष मैले लगानी सम्मेलन (Investment Summit) गर्ने योजना बनाएको छु । यसबारे सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य, यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु समाजका अग्रज तथा अग्रणी व्यक्तित्वहरुसँग निरन्तर छलफलको क्रममा छु । सकेसम्म बेलबारी नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु । यो एउटा गौरवको योजना रहेको छ । मलाई विश्वास छ, तपाईँ हामी सबैको सकारात्मक सहकार्यका साथ यो योजना सफल बन्ने छ ।
युवाहरुले जेसीजमा आबद्ध हुनुपर्ने खास कारण चाहिँ के हाे जस्तो लाग्छ ?
युवाहरु परिवर्तनका संवाहक हुन् । उनीहरु भित्र असीमित संभावनाहरु रहेका छन् । अहिलेको पुस्ताको एउटा कमजोरी भनौ या बेवास्ता, उनिहरु आफूभित्र रहेको प्रतिभा र सम्भावनालाई पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् । जन्मदै कोही सक्षम र असक्षम हुँदैन । सबैसँग भिन्न भिन्न कला, क्षमता र विशेषता रहेको हुन्छ । जेसीजले विभिन्न किसिमका तालिमहरुको माध्यमबाट युवाहरुमा रहेका असिमित सम्भावनाहरुलाई प्रस्फुटित गराउने कार्य गर्दछ । एउटा नीडर, कुशल, असल र जिम्मेवार व्यक्तित्वको निर्माण गर्ने गर्दछ । यो संस्थामा कुनै पनि धर्म, लिङ्ग, भाषा, सिद्धान्त वा संस्कृतिको आधारमा विभेद हुँदैन । विधिको शासन अनि एक व्यक्ति, एक वर्ष, एक पद जस्तो अनुकरणीय र उदाहरणिय सोचका साथ स्थापना भएको यो संस्थामा युवाहरुको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको छ ।
जेसीज भनेको पैसावालाहरुको संस्था हो भन्ने कतिपयको बुझाइ छ नि ?
मैले पनि सुनेको छु । पैसा नहुनेहरु जेसीज हुँदैनन् रे । सबैको आ–आफ्नो बुझाइ हुन्छ । तर भ्रम र यथार्थ बिच हामीले भिन्नता पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । सदैव भ्रममा मात्र बाँचिरहने कि यथार्थलाई पनि बुझ्ने चेष्टा गर्ने यो व्यक्तिगत कुरा हो । मैले बुझेको जेसीजमा उमेर समूह (१८ देखि ४०) बाहेक अन्यकुरामा विभेद देखेको छुइन । बरु विभिन्न तालिमहरु र अवसरका माध्यमबाट युवाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सक्षम बनाउन जेसीजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
जेसीजमा लागेर के पाएँ र के गुमाएँ जस्तो लागेको छ ?
जेसीजमा लागेर धेरैथोक पाएको अनुभूति भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एउटा भिन्न परिचय पाएको छु । साँच्चै भन्नु पर्दा यस क्षेत्रमा मेरो परिचयसँग जेसीज जोडिएको छ । मैले धेरै साथिभाइ कमाएको छु, सर–सहयोग, शुभकामना र भातृत्व कमाएको छु । मलाई केहि गुमाए जस्तो त लाग्या छैन तर पनि जेसीजमा लागे पश्चात् मैले मेरो मनभित्रको एक प्रकारको डर, त्रास, लज्जाबोध र निराशा सम्पूर्ण गुमाएको छु ।
८. जेसीजको कार्यभार ग्रहण गरिसके पश्चात् के कस्ता कार्यहरु गरिरहनु भएको छ ?
मैले इन्द्रपुर जेसीजले प्रजातन्त्र दिवसका दिन विगत वर्ष देखिनै नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छु । त्यसैगरी विभिन्न तालिम अनि सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छु । अहिले कोरोना भाइरसले विश्वनै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा अनि एक प्रकारको डर र त्रास फैलिरहेको समयमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाकाे प्रर्बद्वनमा नगरमा रहेका विभिन्न विद्यालयमा साथै वडा कार्यालयमा समेत यसको यथार्थ र भ्रमबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाे छ । प्रस्तुतकर्ता : मणिराम दाहाल / सुन्दरहरैंचा